Lohahevitra samihafa amin'ny geofumadas
ArCADia BIM - Solon'ny Revit
[nextpage title = "ArCADia 10"] Mila teknolojia BIM ve aho anio? Ny teny hoe Model Information Information Modeling (BIM), izay voafaritra ao amin'ny Wikipedia, dia ny maodelin'ny fampahalalana momba ny fananganana sy ny trano. Na dia nanjary fahita aza io teny io tato ho ato, betsaka ny olona mbola tsy mahatakatra tsara an'io hevitra io satria ...
Fivarotana an-tserasera an-tserasera
Ka tompona Chrysler mirehareha ianao? Karazana Chrysler inona no anao? Voyager, 300, Neon, PT Cruiser, Vision, Viper, Sebring, Crossfire, na Grand Caravan ve izany? Ny fiara rehetra an'ny marika amerikana Chrysler dia miavaka ary manolotra ...
Famoahana BIM vaovao: BIM amin'ny fiteny tsotra
Ny Bentley Press Institute, mpamoaka boky maro an'isa sy boky asa fanoloran-tena natokana ho an'ny fandrosoan'ny BIM ampiharina amin'ny faritra maro toy ny maritrano, ny injeniera, ny fananganana, ny asa, ny geospatial ary ny fanabeazana, dia nanambara androany ny fahafahan'ny ny lohateny vaovao, BIM amin'ny teny tsotra, dia samy misy ...
Tsy mitovy izany. Miavaka amin'ny sarintany taloha sy sarintany ara-tantara
Lahatsoratra nosoratan'i Antonio Crespo izay nanazava ny fahasamihafana misy eo amin'ny heviny, eo anelanelan'ny sary an-tsary taloha sy ny tantara an-tsary
Ny Herin'ny Infographics
Andro vitsy lasa izay dia niresaka tamin'ny iray amin'ireo mpanoro hevitra ahy aho momba ny maha-zava-dehibe ny fandikana ireo hevitra tena manan-danja indrindra amin'ny sary an-tsary. Na sarintanin-kevitra, sarintany uml, tabilao mikoriana, na doodle tsotra amin'ny servieta fisakafoanana, ny zavakanto amin'ny fandaminana hevitra dia miafara amin'ny fialamboly fotsiny. Ny infographic ...
Ny fironana ara-teknolojia eo amin'ny sehatr'asa ara-tontolo iainana ara-tontolo iainana any Amerika Latina
Ao anatin'ny sehatry ny tetik'asa miaraka amin'ny PAIGH, andrim-panjakana avy amin'ny firenena amerikana latina 3 (Ekoatera, Colombia ary Uruguay) no miasa amin'ny tetikasa "Scenario ho an'ny famakafakana ireo fironana vaovao amin'ny Infrastructure Data Spatial any Amerika Latina: fanamby sy fotoana mety". Amin'ity toe-javatra ity, manasa anao izahay handray anjara amin'ity fanadihadiana ity ho fanampin'ny fanampiana anay amin'ny famoahana sy fanaparitahana ...
jeospatial - GIS, maro
Ireo mpandresy amin'ny 7 Natural Wonders
Araka ny nambara, tamin'ny 11/11/11 dia nambara ny fahagagana 7 nandresy; Na dia fanonona mialoha aza izy io satria andro vitsy no hanisana ny fanisana ofisialy, dia mety tsy azo ovaina ny fironana ary tsy hisy hiova. Ao amin'ity lahatsoratra ity, izay heveriko fa ho farany amin'ity lohahevitra ity, dia tanisiko izy ireo nefa tsy voatery hanana baiko ...